Qoraalada Cabdisamad Xoday
Qaybta 1aad | Qaybta 2aad | Qaybta 3aad
YAY U TAHAY MAALINTA JACAYLKA
Waxaan Somalitalk.com ka akhriyey qoraal ciwaankiisu ahaa: Wax ka baro maalinta Jaceylka Adduunka!(Valentine’s day). Markii hore waxaan moodey in qoraalku arrintan ka hadlayo isagoo ka duulaya aragti ku salaysan muslimnimo...
Nabigeenni waa la caayey, waxaana lagula kacay wax aan lagula dhicin nabi ummaddiisi nooshahay. Wax kasta oo laga faano ayaa lagu tilmaamay, iyadoon la tix-gelin shucuurta bilyan iyo badh muslimiin ah oo dunida ku dhaqan.
La yaab ma lahan in dal gaalo ahi gabar muslimad ah ku yiraahdo waddankayaga xijaab kuma qaadan kartid! Ama iska dhig ama orod waddankayaga nooga tag, waxaase layaab ah in dowlad muslim sheeganaysaa soo...
Magaca Ilaahay anigoo ku bilaabaya, kuna sallinaya Nabigeenna Muxammad ah waxaan halkan ku soo koobayaa arrimaha....:
BOQORADDA DENMARK: WAA IN AYNU ISLAAMKA HOR ISTAAGNAA!
Boqoradda ka talisa dalka Denmark ayaa ku dhawaaqday erayo aad u kul-kulul oo ku wajahan muslimiinta dalkeeda jooga....
MOWLIIDKA, SAX MISE KHALAD? (DOOD CILMIYEED)
Waxaa masaajidka jaamaca ah isugu soo galay sheekh Faarax iyo sheekh Bashiir. Labada sheekh oo ilaa yaraantoodi isku xer ahaan jirey, muddo dheerna saaxiibbo ahaa waxaa si lama filaan ah uga dhex bilaabatay...
Xaaladda Magaalada Qudus oo Cakiran.
Xaaladda magaalada Qudus ayaa maanta cakiran. Kumanaan iyo kumanaan Yuhuud ah ayaa kusoo qulqulaya agagaarka masjidka Al aqsaa ee....
Shirkii Soomaalida Oslo Oo Guul Ku Dhammaaday
Dad tiradooda lagu qiyaasay (1700) oo soomali ah ayaa soo gaba-gabeeyey shir islaami ah oo muddo 5 maalmood ah uga socdey bartamaha magaalada Oslo, caasimadda Norway....
DOODDII BARLAMAANKA DURUUS BAA KU JIRT
Waxa wax lala yaabo, in badanna lala murugoodo ah in “xulkii qaranka soomalaiyeed” iyo “gar-wadeenkii siyaasaddu” ay maanta kuraas madaxa iskala dhacaan, iyagoo weliba jooga aqal ay marti ku yihiin....
Asadoow! Ciidammo Itoobiyaan ah yeelimaynee Fahad iskadaa!
Waxaan akhriyey maqaal uu qoray nin magaciisa ku sheegay Asad Caddaani oo uu cinwaan uga dhigay “Muusannowga Fahad iyo Ciidammada Itoobiya” kuna raddinayey qoraal uu horay u faafiyey Fahad Yasiin oo uu kaga hadlayey...
Run ahaantii markii aan soo galo bogga somalitalk.com ma wada akhriyo waxa ay qoraan dadka wax ku qora boggan oo dhan, ee waxaa jira dad fara ku tiris ah oo qormooyinkoodu ay isoo jiitaan. Dadka aan qoraaladooda akhriyo waxaa ka mid ah Fahad Yasiin Xaaji-Daahir. Fahad waa nin dhallinyaro ah oo aad u niyad wanaagsan, sida aan ka fahmo qoraaladiisa.. Guji...
Fiqado, wuxuu ka mid ahaa Baadariyada ugu waaweyn uguna caansan dalka Ethiopia. Wuxuu ku caanbaxay gaalaysiinta dadka reer Ethiopia, wuxuuna noqday mid ka mid ah dadka ugu firfircoon hawshaas gaalaysiinta isla markaana wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn ee diinta Kristaanka dalka Ethiopia. Isagoo ka faa’iidaysanaya caanimadaas iyo mansabkaas uu ka gaaray diinta iyo kaniisadaha dalkiisa, ayuu wuxuu helay lacag iyo jaah aad u sarreeya, wuxuuna noqday mid ka mid ah baadariyada ugu khatarsan Geeska Afrika oo dhan... Guji...
Internetka ayaa sannadahan danbe noqday meel bannaan oo qofwalba uu ku faafiyo waxa uu isagu aaminsanyahay. Waxaad ka heli kartaa wax walba oo iska soo hor jeeda; xaq & xaqdarro, gaalnimo & islaamnimo, xumaan & samaan, jihaad & argagaxiso, dagaal & nabad iyo waxyaabo kale oo farabadan oo iska soo hor jeeda... Guji...
Waxaan xusuustaa sannadkii 2000, markii uu socdey shirkii (Carta) ayaan ka fakarey waxa kasoo bixi kara shirkii Carta, waxaana iisoo baxday sidaas ay xaaladdiisu ku danbaysey. Waxaan oran jirey sidii ay dad badan oo ila aragti ahi qabeen: waxaa kasoo baxaya “ koox iyo qabqable cusub” “new faction and warlord”. Guji....
Alla nasiib badanaa qofkii uu Ramadaan usoo galo oo Allaah waafajiyo inuu ka faa’idaysto. Ayaan daranaase kan uu Ramadaan usoo galo oo uu dhaafo isagoo aan loo danbi dhaafin, oo aan ka faa’idaysan... Guji....
Waxaa jirta oraah oranaysa Soomaalidu waa ''Oral society'', dad hadla aanse wax qorin waxna akhrin. Haddaba, maxaa ka jira arrintaas, saamayn intee le’eg bayse ku leedahay bulshada?. Dhammaan dadka diraaseeya cilmiga bulshadu waxay isku waafaqsanyihiin in bulsho walba uu garaadkedu ku dhisanyahay hadba inta ay aqoonteedu le'egtahay. Ummad walba oo uu hooseeyo heerkeeda aqooneed, waxaa hubaal ah in garaadkeeda, wacyigeeda, wax-soosaarkeeda iyo fursadda ay u leedahay siijiritaanka mustaqbal ay hoosayso.... Guji...